Kune chikamu chevanhu vakapenga murudo nekufamba. Ivo vari kuramba vachiedza kushanyira makona matsva epasi redu. Kune imwe chete nzvimbo yekudenga. Ino inyika diki asi inoshamisa inonzi Qatar. Level…
Chundzha matsime anopisa - inzvimbo yakasarudzika yekudzorera hutano
Kune huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzinoshamisa uye dzakasarudzika zvechokwadi muKazakhstan, idzo dzakakodzera kushanya panguva yekushanya kwenyika ino. Imwe yenzvimbo idzi musha mudiki weChuzha. With chii…
Muchikamu chekumabvazuva kweEurope, munzvimbo dzakadzikama dzemakondinendi (masango uye masango-masango) pakati pemaodzanyemba eUkraine, kumadokero kweRussia uye kuchamhembe kweCrimea peninsula, Gungwa reAzov rinowanikwa. Iwo mahombekombe, kana zvimwe zvikamu zvacho,
Nhasi tinoenda kuguta rine zuva reMiami (Florida). Iri guta, senyika yese muAmerica, inoonekwa senzvimbo huru yekutandarira yenyika. Anoshamisa zvisikwa, akanakisa mahombekombe, inoshamisa mamiriro ekunze uye yakapfuma nhoroondo, ...
Vanhu vazhinji vanogara vachiuya kuguta guru kuzoona zvinotyisa zveMoscow. Munguva yechando, senge chero imwe nguva yegore, iwe unogona kuona akakurumbira ensembles eRed Square, shanyira Bolshoi Theatre uye nevamwe ...
Salou ndiyo inonyanya kufarirwa nzvimbo yekuSpanish Costa Dorada. Iyo inokodzera mhuri, pamwe neadrenaline-nyota yevechidiki uye vadikani vanoda. PortAventura Park ihombe ...
Vamwe vedu kazhinji takawana chirevo chakadai seJunior Suites. Chii ichocho? Iwe unofanirwa kuziva kuti iri izita reimwe yemakamuri zvikamu muhotera. Gore rega rega kufarirwa kwenyika dzekunze ...
"Kubvumirana kweMakungwa" - liner rakakura kwazvo pasirese
Ngarava yekufambisa "Harmony yeMakungwa" ndiyo ngarava hombe pasi rose nhasi. Iyi hofori yekirasi ye "oasis" ine 362,12 metres yakareba uye 66 metres yakafara. Kureba kwayo ...
Iyo metro iri muguta guru inogara ichichinja. Zviteshi zvitsva nemitsara zviri kuvakwa. Izvi zvinokutendera iwe kuti ubatanidze nzvimbo dzakasiyana dzeguta nemaguta munzvimbo imwechete yekutakura network. Iyo Metro inokutendera iwe kukurumidza kuwana kubva kune imwe nharaunda kuenda ...
Vagari vese vanoshanda veRussian Federation vane mvumo yekugara kuzororo zvinoenderana neBumbiro renyika. Zvinyorwa zvakakosha pane kupihwa kwekumanikidzirwa zororo zvinotongwa nezvinyorwa 114-128 zveLabhodhi Code yeRussia Federation. Art. 122 inovimbisa kodzero yeku ...
Aquapark "Baryonyx": mitengo uye ongororo. Aquapark muKazan "Baryonyx"
MuKazan unogona kuwana zvivaraidzo zvivakwa zvemarudzi ese ekuravira uye bhajeti. Vagari vemo vanenge vasina kujairana nemubvunzo wekuti voenda kupi paweekend. Izvo zvakanyanya kuomarara kusarudza chaiko kwekuenda nemhuri yese. Imwe ye…
Kubva munaGunyana 14, 2015, vagari veRussia vanofanirwa kutorwa mafingerprints eiyo Schengen visa. Kuzviisa kweiyo biometric data inosungirwa kune wese munhu. Maitiro ekunyorera eminwe anoitwa kumamiriri, anotenderwa vhiza nzvimbo dzematunhu ...
Anapa - Vityazevo airport. Mufananidzo, kero, chinhambwe
Vityazevo yekutanga-kirasi yepasi rese airport yekukosha kwemubatanidzwa, iri muKrasnodar Territory. Kero yeVityazevo airport iri muguta reAnapa inopatsanurwa nemakiromita mashanu kubva kuchiteshi chechitima cheAnapa (iyo yakaoma nzvimbo iri kuchamhembe-kumabvazuva), uye kubva ...
Kumusoro-kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEast European Plain kune inoshamisa uye inoyevedza Lake Ilmen. Iyo Novgorod dunhu, iyo yekumadokero chikamu chayo, inoganhurana nenyika yePskov neTver uye inoramba ichikwezva vashanyi, varedzi uye ...
Vanhu vanogara vachienda kunze kwenyika vanongoda kuziva chinonzi multivisa. Iri igwaro remvumo yekupinda iro rinopa kodzero yekupinda munharaunda yeimwe nyika huwandu husingaverengeki hwenguva Zvisinei nenyaya yekuti…
Rwendo rurefu runotora simba rakawanda, saka vanhu vari kuwedzera kutendeukira kumasevhisi eair ndege. Hazvishamise kuti mufambi asangane nemamiriro ezvinhu kana ndege yake yanonoka. Uye ipapo vamiriri vendege vanofanira kupa mutengi chikafu, ...
Mubvunzo wekuti makiromita mangani kubva kuRostov kusvika kuCrimea awana kukosha kwakanangana nekuseri kwezviitiko zvematongerwo enyika zvisina kugadzikana muUkraine kutanga kwegore rino. Iyo Crimea peninsula yakaverengerwa muRussia ...
Canada inzvimbo muNorth America iyo yakabatanidza tsika dzakasiyana nemitauro. Panyaya yenharaunda yaro, nyika inova pechipiri mushure meRussia. Kukosha kwenyaya mune yanhasi nyika Makore ese vanhu havatombouya pano ...
Bangladesh ... Nyika ipi iri? Ari kupi iye?
Bhangiradheshi? Ndeipi nyika ino? Aripiko iye? - mibvunzo yerudzi urwu inogona kunzwiwa kazhinji. Zvisinei, hapana chikonzero chekumhanyira kupa mhosva avo vanofarira kuverenga kwekuverenga. Bvumirana, nezve diki diki mamiriro iwe unogona ...
Muchato chiitiko chinopembererwa pamwero mukuru. Nekudaro, kwete chete iro zuva remuchato rinofanirwa kuve rakakosha kune vachangochata, asiwo husiku hwemuchato. Kuchengeta iyo nguva iri yakakwana, yakakwana ...
Mibvunzo ye68 mu database yakagadzirwa mu 1,685 masekondi.